Amasu Okuqukethwe Nokusebenziseka Kokuqukethwe
Ukuqhubeka nokuqhubeka ngiyabona ukuthi abanye onjiniyela bezokuxhumana abatshela izinkampani ukuthi akunandaba lapho babamba iqhaza ezinkundleni zokuxhumana, kuphela ukuthi empeleni do. Abanye bathi ukuthuthukiswa kwe- a isu lokuxhumana kwezenhlalo ngaphambi kokuqala.
Kunemibuzo emihlanu okudingeka uzibuze yona lapho udala okuqukethwe kuwebhu:
Okuqukethwe kufanele kubekwe kuphi? - ipulatifomu obeka kuyo okuqukethwe kufanele yenzelwe izethameli eziqondiwe ofisa ukufinyelela kuzo. Uma uzama ukufinyelela kubasebenzisi benjini yokusesha, qiniseka ukusebenzisa ipulatifomu elungiselelwe izinjini zokusesha. Uma uzama ukufinyelela kubasebenzisi bezebhizinisi nabamabhizinisi, qiniseka ukugxila kumanethiwekhi ahlinzeka amabhizinisi. Uma ubheka ukuhlinzeka ngevidiyo esezingeni eliphakeme, yibeke kungxenyekazi engayisebenzisa.
Okuqukethwe kufanele kubekwe kanjani? - Okuqukethwe kukhona ukushayela ithrafikhi, futhi ekugcineni, ibhizinisi lenkampani yakho. Ukubeka okuqukethwe kwakho ngezincingo ezinamandla zokubizela esenzweni ezifanele ekuthengiseni ukushayela kubalulekile. Uma ubhala i-tweet futhi ufuna ukuphinda ubhale kabusha, shiya indawo engaphezulu kwezinhlamvu eziyi-140 ukuze uthole abamukeli abaningi noma imibono.
Yikuphi okuqukethwe okufanele kubekwe? - Okuqukethwe okufanele kuhehe i-traffic virally kungadinga ukuthi kube okuhlekisayo kakhulu kunokuqukethwe okufana nje namagama angukhiye wokuthola izinjini zokusesha Okuqukethwe ngaphakathi kwe-e-book kufanele kungabi okuxoxa kakhulu futhi kuhleleke ngokwengeziwe. Okuqukethwe ngaphakathi kwebhulogi kufanele kube namachashazi, kufakwe isithombe esimele, kanye nesitayela sokubhala esixoxayo.
Okuqukethwe kufanele kufakwe nini? - Uma inhloso yakho ukuheha abantu emcimbini, hlela ukukala okuqukethwe ngaphambi, ngesikhathi nangemva komcimbi ukukukhuthaza. Uma umgomo wakho kuyizithameli zebhizinisi, shicilela phakathi nezinsuku. Ukwazi ukuthi uzokushicilela nini okuqukethwe kungakhuphula ukuguqulwa kwakho.
Kufanele ngikubeke kangaki okuqukethwe? - kwesinye isikhathi, ukuphinda umlayezo kungakhuphula ukuguqulwa kukonke. Kwesinye isikhathi ukubhala kanye ngenyanga ngesihloko esithile kungaholela kumazinga entengo athuthukisiwe kunokumane ubhale kanye bese uyama. Ungesabi ukuziphinda. Izivakashi ezibuyayo zikhohlwa (noma zidinga isikhumbuzi) futhi izivakashi ezintsha kungenzeka ukuthi azange ziwubone umyalezo phambilini.
Ukulahla okuqukethwe kuwebhu ngaphandle kwecebo kungakutholela imiphumela ethile kepha ngeke kulungiselele futhi kusebenze ngokugcwele umsebenzi owenzayo. Kunzima ngokwanele ukuthuthukisa okuqukethwe okunomthelela - qiniseka ukuphendula imibuzo ethile kokuqukethwe okubhalayo esikhundleni sokukulahla nje.
Tags: ukusayina incwadiimali engenayoimpendulo yomsebenzisiimibono yomsebenzisi
Ungayibhala Kanjani Incwadi Futhi